ပို့စ်တင်ချိန် - 11/13/2013 03:12:00 PM
မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေကို မိခင်နို. တိုက်ကျွေးဖို. အားပေးတဲ့ အနေနဲ. ကလေး မီးဖွားပြီးချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် နို.ချို တိုက်ကျွေးတဲ့ မိခင်တိုင်းကို ဗြိတိန်အစိုးရက ပေါင် ၂၀၀ တန် ဈေးဝယ်ဘောက်ချာတွေ ကမ်းလှမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် အစိုးရနဲ. ဆေးသုတေသန ဌာနတို. ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကို Yorkshire တောင်ပိုင်းနဲ. Derbyshire ဒေသတွေမှာ စတင်ဖို. စီစဉ်ထားပြီး တတိယမြောက် ဒေသတစ်ခုမှာ မကြာမီ ထပ်မံ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို. မျှော်မှန်းထားပါတယ်။
ဒီဒေသတွေမှာ အစီအစဉ် အောင်မြင်ခဲ့ရင် နောက်နှစ်မှာ ဒီအစီအစဉ်ကို အင်္ဂလန် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ. တိုးချဲ. လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အစီအစဉ်ကို မိခင်နို. တိုက်ကျွေးမှု ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပစ်မှတ်ထား စတင် လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ မိခင်တွေရဲ. ထက်ဝက်ကသာ မိခင်နို. တိုက်ကျွေးတယ်လို. သိရပြီး အထက်ပါ ဒေသတွေမှာတော့ မိခင် လေးဦးမှာ တစ်ဦးကသာ မိမိကလေးကို ကိုယ်တိုင် နို.ချိုတိုက်ကျွေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိမိမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ကလေးကို မိခင်နို. ကိုယ်တိုင် တိုက်ကျွေးဖို. ယခုလို ငွေကြေးနဲ. ဆွဲဆောင်တာဟာ မသင့်တော်ဘဲ ကလေးရဲ. ကျန်းမာရေးနဲ. အခြား အကျိုးရလဒ်တွေအတွက် မိခင်ကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလားနဲ. လုပ်ဆောင်တာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။
ဗြိတိန်ကျန်းမာရေး ဌာန အနေနဲ. ဒီလိုမျိုး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ. ဆွဲဆောင်မှုတွေ ပြုလုပ်တာဟာ ဒါ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်က ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရေးနဲ. ဆေးလိပ်တိုက်ဖျက်ရေးတွေမှာ ဒီနည်းကို သုံးစွဲအောင်မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။